Calendar 2014 “Botanical Life” Kalandarka - Joornaalka Naqshadeynta
Kalandarka Nolosha Botanical waa jadwal kaaha oo iftiiminaya nolosha dhirta qurxoon ee hal xaashi. Fur xaashida oo saldhig dhig si aad ugu raaxaysato noocyo kala duwan oo soo-saarno ah. Naqshadayaasha tayada leh waxay leeyihiin awood ay wax kaga beddelaan boos oo ay u beddelaan maskaxda isticmaaleyaasheeda. Waxay bixiyaan raaxo aragtida, haysashada iyo adeegsiga. Waxay lafiican yihiin iftiin iyo shey la yaab leh, oo kobcinaya boos. Alaabtayada asalka ah waxaa loo habeeyay iyadoo la adeegsanayo fikradda Nolosha ee leh Naqshadda.
Magaca mashruuca : Calendar 2014 “Botanical Life”, Magaca naqshadeeyayaasha : Katsumi Tamura, Magaca macmiilka : good morning inc..
Kalandarka Katsumi Tamura Calendar 2014 “Botanical Life”